Mitemo uye Matipi Ekutsigira Up paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Pane kutyisidzira kwakawanda ku data rako. Uye kunyangwe malware isiri iyo yakajairika kune masisitimu eGNU / Linux, izvo hazvireve kuti hapana njodzi yekuregererwa. Kunze kwaizvozvo, panogona kuve nechero mhando yesoftware bug inokanganisa iyo data, hard drive kurovera, moto, mafashama, tsaona, kudzima magetsi, nezvimwe. Naizvozvo, iwe unofanirwa kufunga nezvekugadzira backup makopi kuitira kuti matambudziko aya arege kukubata usina zvombo uye iwe uine backup kuti ukwanise kudzoreredza iro rese ruzivo (kana mazhinji acho).
Kunyanya zvakanyanya riini urikushanda nefoni. Zvino, nedenda, vanhu vese vanoshanda kubva kumba vakamanikidzwa kuve nemitero data, data revatengi, zvinyorwa zvekambani, nezvimwe, zvese paPC yavo. Mune zviitiko izvi, zvikonzero zvekutsigira zvine simba zvakanyanya kupfuura zvemushandisi wemusha. Muchokwadi, iyo inonyanya kukosha iyo dhata yaunobata, inowedzera kuwanda kwemakopi ekuchengetedza aunoita ...
Zvimwe zvinyorwa zveLxA zvakatotaura pamusoro pehuwandu hwezvirongwa zvekugadzira makopi ekuchengetedza muGNU / Linux, pamwe nezvimwe zvidzidzo kuratidza maitirwo azvo nenzira inoshanda. Ino nguva ichave chimwe chinhu chinowedzera dzidziso, asi pasina chakakosha kune icho. Uye iwo akateedzana mitemo kana matipi kuita backups zvakachengeteka uye nenzira kwayo.
1 Negadziriro yeparutivi Mutemo 3-2-1
1.1 Tsuro dzekuchengetedza
Negadziriro yeparutivi Mutemo 3-2-1
Izvo chaizvo nyore kurangarira uye izvo zvinoshanda kwazvo kune backups. Inowanikwa mu:
3Gadzira matatu akasiyana makopi eruzivo. Kana zvichibvira, shandisa yakavimbika midhiya. Mune mamwe mazwi, dzivisa kushandisa optical discs, ayo anogona kukwenya kana kukuvara pamusoro pemakore.
2- Chengetera mabhakuki aya pane angangoita maviri midhiya. Ndokunge, usabheje zvese pane imwecheteyo yekuchengetedza svikiro, kana kana iyo svikiro iine matambudziko, iwe zvakare ucharasikirwa nezvose.
1: Chengeta imwe yemakopi kune imwe nzvimbo. Haasi ese mabhakiti anoda kuchengetwa munzvimbo imwechete. Fungidzira nzvimbo iyoyo yakazara nemvura, yapiswa, kana kubirwa. Pakadaro, iwe uchagara uine imwe kopi kune imwe nzvimbo. Zvinoshamisika kuti iyo imwe nzvimbo inotamburawo zvakafanana ...
Uyu mutemo unoshanda kwazvo zvirinyore mukana nenzvimbo:
Fungidzira kuti dhirairi rakaomarara rinokundikana ka1 kamwe maawa zviuru zana, semuenzaniso. Zvakanaka, kana iwe uine makopi maviri pamadhisiki maviri akasiyana, mukana wekuti dhata rako richakanganiswa unenge uri 100.000 mu 1.
Nekuparadzanisa panyama mabhakitiriya, unodzivirira matambudziko emoto, kuba, mafashama, nezvimwewo, kubva pakupukuta zvese zviripo zviripo.
Kunze kwekutevera iwo mutemo, kune mamwe zvakare mamwe matipi kuti iwe unofanirwa kuramba uchifunga mupfungwa dzako paunenge uchishandisa yakanaka backup backup pamba uye nebasa, kuitira kuti usazombozvidemba kuti data rako rakarasika kana chimwe chinhu chikaitika:
Nderupi rwekuchengetedza rwakandinakira? Funga nezverudzi rwezvakachengetedza zvakakunakira iwe:
Pedzisa: ichi chinofanirwa kuve chekutanga backup, nekuti iwe hauna kana chinhu chakamboteedzerwa. Ndokunge, irwo rudzi rwe backup rwunoita kopi inosanganisa, ine rese data. Zviripachena, ichave iri mhando ye backup iyo inotora yakawanda nzvimbo, uye inotora nguva yakareba kuti iite, saka zvinongokurudzirwa pane chaiwo hwaro. Semuenzaniso, kekutanga, kana mahofisi akavharwa pakupera kwevhiki, pasati pazororo, nezvimwe.
Inonakidza- Iwo chete mafaera akachinjwa kubvira kopi yekupedzisira mushure mekopi yakazara akateedzerwa. Ndokunge, ichaenzanisa iyo data kubva kunobva uye iyo data kubva kwairi kuenda, uye yaizongoteedzera iwo akachinja zvichienderana nezuva ravo rakashandurwa. Naizvozvo, zvinotora nguva shoma kupedzisa, zvinotora nguva shoma nekusagadzira zvakapetwa zve data rese.
Kusiyanisa: yakafanana nekuwedzera nguva yekutanga painenge ichiitwa. Ndokunge, zvinongotsigira chete data rakachinja kana kushandurwa kubvira backup yekupedzisira. Kune rimwe divi, nguva dzakateerana kwayakatangwa, inoramba ichiteedzera rese data iro rakachinja kubva pane yapfuura yakazara kopi, saka zvinotora nguva yakareba uye kutora nguva yakawanda kupfuura iyo inowedzera.
Calendar-Gadzira chirongwa chekuchengetedza kana kuronga otomatiki mabhakiti nguva zhinji kazhinji. Kuwanda kwacho kunoenderana nemutengo wekugadzirwa kwedata nyowani uye kukosha kwezvakafanana. Semuenzaniso, kana iwe uri mushandisi wemba iwe unogona kuzorodza mutemo zvishoma. Kune rimwe divi, kana iyo data ichinyanya kukosha, senge data rebhizinesi, ipapo makopi anofanirwa kuve akawandisa kudzivisa izvo kubva kune yekupedzisira backup kusvikira dambudziko raitika, pane musiyano wakakura uye rakakosha data rakarasika.
Zvirekodi: Kana iwe wakazvigadzira, usatore chero chinhu seyakareruka. Tarisa matanda kuti uone kana ari kutora nzvimbo. Pamwe pane zvakamboitika uye une chokwadi chekuti zvakaitwa uye hazvisi izvo.
Verified: Tarisa makopi kana apedza. Hazvina kukwana kuzviita, iwe unofanirwa kutarisa kuti dzakarurama uye dzinoenderana, kuti hadzina huori.
Encryption uye kumanikidza- Zvichienderana nemushandisi, iyo data ingangoda kumanikidzwa kutora shoma nzvimbo uye yakavharidzirwa kudzivirira kuwanikwa nevechitatu mapato. Asi, zviitwa izvi zvine njodzi dzazvo uye mutengo wezviwanikwa nenguva. Pakunyora, kiyi inogona kukanganikwa, ichikudzivirira kubva pakuvawanawo, kana panguva yekumanikidza, iyo paketi yakamanikidzwa inogona kushatiswa, nezvimwe. Naizvozvo, usati waita, iwe unofanirwa kufunga zvakanaka kwazvo kana zvichikukodzera.
Ziva kuti data rako riripi- Ma backups emuno akakodzera, asi dzimwe nguva masystem ekuchengetedza gore anoda kushandiswa kune mabhakiti. Iwe unofanirwa kusarudza yakachengeteka uye yakavimbika sevhisi yeizvi, zvine hungwaru nedata nzvimbo muEU.
Njodzi yekudzosa hurongwa: Iwe unofanirwa kuve nemugwagwa wakatarwa kuti uzive maitiro ekuita kana pakaitika njodzi uye unofanirwa kuseta iyo emergency system. Kusiya zvese zviine mukana haisi zano rakanaka. Kunyanya zvakadaro kana zvasvika kune kambani inofanirwa kupa inokurumidza sevhisi kune vatengi vayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Mitemo uye matipi ekutsigira paLinux
"Tsuro dzekuchengetedza" = Kushungurudzwa kwemhuka
Hondo yekutinhira ine chiitiko chitsva chekugadzira online
LibreWolf, Firefox yakagadzirira kuve yakavanzika nekukurumidza kana uchinge watanga